फ्लप फिल्मका हिट हिरोइन | Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.
Published date : 2018-04-27 Your IP - 34.203.245.76
काठमाडाैं । फिल्मी संसार त हाे, पछिल्लाे समय फिल्म चलेर मात्र कलाकार स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता भत्कदै गएको छ । रजतपटमा जसका फिल्म सुपर फ्लप भए पनि सोही फिल्मका कलाकार भने हिट भएका धेरै उदाहरण देखिन्छ ।
अभिनेत्री केकी अधिकारीको फिल्मी भाउ गगनचुम्बी नै छ । तर, उनलाई फ्लप फिल्मकी हिट हिरोइन भनेर भन्न सकिन्छ । उनले अभियन गरेका मसान, आइ एम सरी, मायाको बारीमा जस्ता फिल्म असफल बने ।
यस्ता कलाकारलाई भान्यमानी भन्दा फरक अाजकाल नपर्ला । यस्ता भाग्यमानीमा नेपाली फिल्मका हिरोइनहरु बढी पर्छन् । जस्तो अभिनेत्री प्रियंका कार्कीकाे कुरा गरौँ, जसका अधिक फिल्म फ्लप छन् । आफू भने हिट छिन् । उनको चर्चा कहाँ पो हुँदैन र । पछिल्लो पटक उनका थ्री लभर्स, भिजिलान्ते र कलिउड सफल हुन सकेनन् । त्यही पनि प्रियंका सबैकी प्रिय हिरोइन छिन् ।
त्यसै गरी, सुमिना घिमिरेका फिल्मको हालत पनि उस्तै छ । यतिसम्म कि उनको कुनै फिल्मले लगानी उठाउन नसकेको फिल्मी पण्डितहरु भन्छन् । रजतपटमा चक्मा दिने नायिका सुष्मा कार्कीका लागि पनि दुखद कुरा के छ भने, उनका फिल्मले पनि भटाभट पानी पिइरहेका छन् ।
त्यसै गरी अभिनेत्री नीता ढुंगानाका पनि फिल्मले बक्स अफिसमा कुनै चमत्कार देखाउन सकेनन् । तर, उनका केही फिल्म व्यावसायिक रूपले मध्यम मानिए । खासमा उनी मसान र नोटबुक फिल्मबाट बढी चिनिन थालेकी हुन् ।
अभिनेत्री निशा अधिकारी त फिल्म निर्माता मात्र होइन काठमाडौँको एलिटहरुका लागि आँखाकी नानी हुन् । अर्थात् सबैकी प्रिय । तर विर्सनै नहुने के हो भने, उनको पछिल्लो फिल्म हाउफन्नीले दर्शक तान्न सकेन । असफलता ब्यहोरेर पनि उनी हिट कलाकार मानिन्छन् । त्यस्तै, अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ पनि फ्लप फिल्मकी हिट हिरोइन हुन् । सानो संसार, मेरो एउटा साथी छ, मिस यु, छड्के जस्ता फिल्ममा देखिएकी नम्रता मिडियामा धेरै छाउने र राम्रो अभिनय गर्ने सुन्दर अभिनेत्रीको लिस्टमा गनिन्छिन् ।